Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. शिवको पूजाआराधना गरी देशभर महाशिवरात्री पर्व मनाइयो – Emountain TV
शिवको पूजाआराधना गरी देशभर महाशिवरात्री पर्व मनाइयो
काठमाडौं, १ फागुन । महाशिवरात्री पर्व आराध्यदेव शिवको पूजाआराधना गरी देशभर मनाइएको छ । शिवरात्रीका दिन पशुपतिनाथको दर्शन गर्न ठूलो संख्यामा दर्शनार्थी पाशुपत क्षेत्र पुगका थिए । तर उचित व्यवस्थापन नहुँदा दर्शनार्थीले सास्ती बेहोर्नु पर्यो ।
शिवजी उत्पत्ति भएको रातको रुपमा शिवरात्री पर्व मनाउने प्रचलन छ । शिव पुराणमा उल्लेख भए अनुसार चार रात्री कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रीमध्ये एक पवित्र रात्री शिवरात्री हो । यस दिन वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले बिहानै नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी शिवालयमा गएर श्रद्धाभक्तिपूर्वक पूजाराधना गर्छन् ।
भक्तजनले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजाअर्चना गरी व्रत बस्ने र शिवको प्रिय वस्तु दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने गर्छन् । यस पर्वका दिन उपवास गरी रातभर जाग्राम बसेमा सिद्धि प्राप्त भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास छ ।
यही विश्वासकासाथ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न देशका विभिन्न स्थान देखि भारतबाट समेत आएका दर्शनार्थीले दर्शनका लागि सास्ती बेहोर्नुपर्यो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दर्शनका लागि सहज व्यवस्था मिलाएको दाबी गरे पनि दर्शनार्थी घण्टौं लाइन लाग्नुपर्यो ।
फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यस पर्वलाई सम्पूर्ण दीनदुःखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीको हृदयमा धर्मको उदय गराउने आशुतोष भगवान् शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा लिइन्छ । यसैले लामो समयसम्म लाइन बसेर दर्शन गरेका दर्शनार्थीले पनि देशको शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि कामना गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
आजको दिन महादेवलाई जाडो हुने विश्वासका साथ घर, चोक र मठमन्दिरमा दाउरा बालेर धुनी जगाई भजनकीर्तन गर्ने चलन छ । साथै सोही आगोमा प्रसाद बनाई ग्रहण गर्ने गरिन्छ ।